Boqolaal Arday oo kasoo laabtay Itoobiya, kuna soo wajahan Puntland & Somaliland.
WAJAALE(P-TIMES) – Boqolaal arday Soomaaliyeed oo wax ka baranayay jaamacadaha dalka Itoobiya ayaa loo xiray goobaha Waxbarashada, dawladda dalkaasna waxay ku amartay in ay dalkoodii dib ugu laabtaan, taasi waxay kaliftay in ay dhalinyarro badan go’aansaden in ay aqbalaan warka dawladda Itoobiya oo ay dib ugu laabtaan Soomaaliya.
Ardaydan ayaa badankooda kasoo gudbaya xaduudaha u dhaxeeya Soomaaliya & Itoobiya, gaar ahaana Wajaale oo ah dhanka Somaliland iyo waliba dhanka gobalka Doolo ee Puntland oo ay kasoo galayaan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay shalay ardaydan ayaa sheegay in ay gaadiid u diyaariyeen oo ay u gudbinayaan dhinaca Soomaaliya, cid kasta oo kasoo jeeda deegaanadaas.
Ardayda deegaanada Somaliland ayuu sheegay in lamarin doono hanaanka caafimaadka ee la diyaariyey, taas oo ka dhigan in ay amri doonaan Karantiilka 14 cisho ah ee lagu hayo qaar kamid ah dad kasoo dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa.
Talaabada Somaliland ayaa loo arkaa mid muujinaysa la tacaalida faafida cudurka Corone-Virus iyo taxadar dheeraad ah oo ay muujinayso, si looga hortago, laakiin is weydiimo badan ayaa dul-hoganaya arrimaha ku saabsan dhanka xaduudaha Soomaaliya.
Inkastoo wasaaradda Caafimaadka dawladda Faderaalka ay xaduudaha gobalka Mudug geysay shaqaale caafimaad, uusana jirin kiis arday soo laabtay oo laga helay xanuunkan, haddana walaaca la muujinayo ayaa ah sida ay u xakameyn karaan arrintan.
Wasaaradda Arrimaha gudaha ee Puntland ayaa shaacisay 27-kii bishan amaro ku wajahan in la xirayo xaduudaha oo dhan ee Puntland ardayda soo laabanaysa oo wadata karaka Aqoonsiga ardaynimo oo kaliyana loo sahlayo in ay kasoo gudbaan, laakiin wasaaraddo ma sheegin barista asaasiga ah ee lamarayo.